နဲ့တူတယ်ဆိုရင်၊သင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်မှကြွလာသောအခါအရင်းအမြစ်အကောင်းဆုံးအလိုးအရေးယူနှင့်အတူသင်ျဓိကအကြောင်း–အထူးသဖြင့်မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူဗီဒီယိုဂိမ်းများ–ဒါဟာတကယ်ပဲတော်တော်လေးမင်းအတွက်ခဲယဉ်းအရာတစ်ခုခုရဖို့ရန်အကြောင်းမှသက်ဆိုင်ရာရဲ့။ အရေအတွက်သူများအားထွက်ရှိနေခဲ့ကြမှာအိပ်ပျော်နေသောဤအမျိုးအစားများနှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါသည်ဝမ်းမြောက်နိုင်မှကြောင်းအစီရင်ခံဂျပန်သင်ျကကယ်ဖို့ဒီမှာပါ။ မရိုက်ပုတ်ချုံပတ်လည်မှာ:ဂိုဏ်းနောက်ကွယ်မှဤအသိုင်းအဝိုင်းများမှာ ၁၀၀%အယာဉ်မောင်းများ၏အနာဂတ်နှင့်သင်ျဂိမ်းကစားချင်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအရာကိုသိရန်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းအားလုံးအကြောင်းပါ။, ကြည့်ရှု၊အများကြီးတစ်ငရဲသွားဒီနေရာမှာအောက်မျက်နှာပြင်ကိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်၌သင်တို့ကိုချပြီးထိတွေ့နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးလိင်ဂိမ်းဖြန့်ချိလူအားလူသိများ။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်သင်ချိတ်ဆက်ဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးအတွက်အာကာသနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မှကြွလာသောအခါရင့်ကျက်သံုးေကြားမိသားစုအဖွဲ့ဝင်–အားလုံးနှင့်အတူအလိမ်။ လျှင်ဤအမှုအရာအသံပူဖို့သင်တို့အလိုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့အပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပါအောက်ပေးမယ်အပြည့်အဝအသေးစိတ်အရာကိုအပေါ်ဂျပန်သင်ျဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်။, စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးမေ့:အဘယ်သူမျှမအထက်ပိုကောင်းကြှနျုပျတို့ပွုပါ!
အကောင်းဆုံးသောအရာတို့ကိုအကြှနျုပျတို့ပွုမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားအွန်လိုင်းအပေးအစွမ်းကစားရန်ခေါင်းစဉ်ကြည့်သောလုံးဝကြယ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့။ ရှုးကျွန်တော်တို့ကိုပဌနာပြု၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ရာကိုဖွင့်သောအများစုအတွက်ဤလုပ်ငန်းအစုအဝေး၏ခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုအဖြစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်သူတို့ဖြစ်နိုင်သည်တတ်နိုင်သမျှ။ အဘယ်ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ဖြစ်ပါသည်? ကျွန်တော်ထင်ပါရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအရွယ်ရောက်ပြီးစီမံကိန်းအင်တာနက်ပေါ်မှာအနီးတြင္မီးေ၊ထိုသို့ရိုးရှင်းစွာမမှန်ကိရိယာများအတွက်အလုပ်အကိုင်အသင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားနိုင်မှလိုဂိမ်းကစားနှင့်အတူသင့်ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကတိကဝတ်များကြီးဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။, ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်၊ဂ်ပန္သင်ျဂိမ်းများပြချင်ပါကြောင်းလူတိုင်းသင်ရှိသည်လာမည့်မျိုးဆက်ဂရပ်ဖစ်အတွက်အရွယ်ရောက်ဖျြော–ဒါဟာတကယ်ပဲတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်လွယ်ကူပြီးတာနဲ့သင်လုပ်၏အချက်အခြာသင်သည်သင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အချိန်ဇယား! ဒါကြောင့်စိတ်ထဲတွင်ထိုအတူ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလရဲ့သင်စူးစမ်းဖို့အပြည့်အဝဒေတာဘေ့စ၏သင်ျဂိမ်းများနှင့်သွားမယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှစ်ခု။ ကျနော်တို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေများ၏အောင်မြင်မှုကိုဤအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ယုံကြည်ကြောင်းတင်ပြရန်ကြာမြင့်သောအရာကိုသင် jizz နောက်တဖန်မကျော်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာ။, ကြီးမားတဲ့ကြွေးကြော်ရ-ထဲကအကိုလေယာဉ်အမှုထမ်းနှင့် ၃D အနုပညာရှင်တွေလည်း–သင်ယောက်ျားတွေကယ့်ကိုအဘယ်သို့သိရသင်ပြုရရှိပါသည်အားပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့၏အကောင်းဆုံးစုဆောင်းခြင်းပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းထုတ်လုပ်သောလူပည္ဆိုင္ရာ!
အဘယျသို့သင်တို့ကိုငါပြောခဲ့လျှင်သင်ထွက်ကြိုးစားနိုငျအားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့? ဒါကမဟုတ်ပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုခုမယ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသို့မဟုတ်အလုပ္ဖြစ်စေအဖြစ်–ငါတို့သည်သင်တို့မာနထောင်လွှားသောအချက်ကိုလုပ်ကိုင်ကြရာမှာလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်ဒေတာဘေ့စနှင့်ကျွန်တော်အမြဲရှာပေးရဖို့ဂိမ်းကစားသူတို့ဘာလိုချင်(ပူလိုးသင်ျဂိမ္း)မပါဘဲသူတို့ကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ထူး။ ဒါကတော်တော်များများအဓိကဒြပ်စင်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းကကျွန်တော်ချစ်အရာအားလုံးထက်အခြား၊ငါတို့သည်သင်တို့အဖို့မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ဖြစ်ခြင်းသင်ပြသောအခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊ကျနော်တို့ရရှိပါသည်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အသွေးအခမဲ့ပလက်ဖောင်းအလုပ်လုပ်။, ပါကစကိုထွက်ခွာနိုင်၊သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းဆိုရင်သိပ်မပျော်နှင့်အတူအဘယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာပွက်ပွက်အောက်မျက်နှာပြင်။ အခါသင်လိုအပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရရန်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး၊ဂ်ပန္သင်ျဂိမ်းများရှိရန်သင်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အပူသင်ျဂိမ်းကစားနှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်အသွားကြဖို့လမ်းဖြစ်–ဒီအကြောင်းမရှိဒွိဟ! ဤပဲနောက်ထပ်အဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုယူလုံခြုံစေရန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိပ်အစက်အပြောက်အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအခါသူတို့လိုအပ်ရ၏ဗဟိုအဘို့အထွက်အနည်းငယ်တြန္းညမ်း jerking။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့–ငါတို့သည်သင်တို့သိအဘယ်အရာကိုသင်ညစ်ပတ် bastards နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း!
ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ချစ်ဂ်သင်ျဂိမ်းများနှင့်ထပ်မံအကြောင်း၊ကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမပေးဖို့လာရန်လိုသူမည်သူမဆိုအတွက်သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအဆိုအကိုသောက်သုံးကြောင်းတလျှောက်လာနှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်၊ဤအခုအချိန်မှာသင်ထင်စေခြင်းငှါအဖြစ်ကြိုးစားနေအတွက်စိတ်ဝင်စားထွက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးအဖြစ်အမြန်ဆုံးနှင့်အမြင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှစ်ဦးမျက်လုံးအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးရတဲ့အထိ။ အဘယ်သူမျှမငြင်းနိုင်ပါကြောင်းမေတ္တာကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်နှင့်ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်းသင်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရုံဘယ်လောက်အများကြီးကအလွန်ကြီးစွာသောတြန္းညမ်းဂိမ္း–အားလုံးတစ်ဦးထိတွေ့နှင့်အတူမိသားစု၏လိင်!
များအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ျ XXX အလှန်အတွေ့အကြုံ၊အသာရပ်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဂျပန်သင်ျ။